Maxkamada Gobolka Banaadir oo xukuntay qofkii dilay Xamdi Maxamed Faarax | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxkamada Gobolka Banaadir oo xukuntay qofkii dilay Xamdi Maxamed Faarax
Maxkamada Gobolka Banaadir oo dhoor bilood gacanta ku heysay kiiska Xamdi Maxamed Faarax oo dil iyo kufsi la sheegay in sanadkii hore loogu geestay Hoteel kuyaala degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa go’aan kasoo saartay kiiskaasi.
Kiiska Xamdi Maxamed Faarax ayaa waxaa u xirnaa sadex nin oo mid kamid ah laga soo qabtay magaalada Cadaado, ninkaas ayaana ahaa ninkii Xamdi Maxamed ka waday Suuqa Bakaaraha sidoo kale geeyay Hotelka lagu dilay
Garsooraha Maxkamada ayaana xukun dil ah ku riday Maxamed Ibraahim Taagane oo Maxkamada ku heshay in isagu masuul ka ahaa dhimashada Xamdi Maxamed Faarax oo aheyd gabar 19-sano jir aheyd.
Maxkamada gobolka Banaadir ayaa sidoo kale la sheegay in ay amartay in lasii daayo labada nin kale ee kiiskan u xirnaa oo kala ahaa ninkii Waardiyaha ka ahaa hotelka dilku ka dhacay iyo ninkii degnaa qolka uu dilku ka dhacay.
Ehelada Xamdi Maxamed Faarax ayaa sheegay in aysan ku qanacsaneyn xukunka ay riday Maxkamada gobolka Banbaadir gaar ahaan labada nin ee maxkmaada sii deysay,. waxa ayna sheegeen in racfaan ka qaadan doonaan xukunkaasi.
Xamdi Maxamed Faarax ayaa la dilay kadibna dabaq dheer laga soo tuuray 11-kii bishii September ee sanadkii hore, waxaana dilka gabadhaasi si weyn uga carooday dadka Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadiisa kunool.
Previous articleQasaare ka dhashay Qaraxii ka dhacay albaabka hore ee taliska guud ee ciidamada Asluubta oo u dhaw isgoyska Ex-Control Afgooye
Next articleMamulka Puntland oo sheegtay in shirka uu Farmaajo ku baaqay aysan tegayn.
Dayax gacmeedka Zhurong ee Shiinaha ayaa soo diray sawirro uu ka soo qaaday Mars oo uu ku jiro mid "selfie" ah oo qudhiisu...
Aston Villa oo rajeyneysa iney ka hor istaagto kabtanka kooxdeeda...
Wararkii ugu danbeeyay ee arimaha doorashooyinka dalka
Barkhad Jaamac Batuun oo ah Beelaha la Yaso Somaliland ...
Dowlada Waqtigeeda dhamaaday oo wado Qorsha ka dhan ah ahmed...
Weerar ka dhacay suuq ay dad badan ka dukaamaysanayeen oo ku...